ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: June 2011
Liu, 19 savedaboy from plunging to his death withakiss.
မနှင်းဖြူလေး ( Snow White ) ပုံပြင်ထဲကအတိုင်း စိတ်ကူးယဉ်ဇတ်လမ်းလေးတစ်ခု အပြင်မှာတစ်ကယ်
လျူဝန်းရှူ အမည်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အနမ်းက အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အ
လျူ ဟာ လွန်ခဲ့ သည့် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ က ရှန်ကျန့် မြို့ လယ်မှ လူကူးတံတားတစ်စင်းပေါ်မှာဖြတ်နေခိုက်
လူငယ်တစ်ယောက် လက်ထဲမှာဓါးတစ်လက်ကိုင်ထားပြီး တံတားပေါ်က ခုန်ချမလို့ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုနေ
တာကို ရာနဲ့ ချီတဲ့ လူတွေ ၀ိုင်းအုံကြည့် နေတာကိုတွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်...
" သူဟာ ( အဲဒီကောင်လေးဟာ ) စိတ်တွေပိုပြီးဆက်ကာဆက်ကာတစ်အားလှုပ်ရှားနေလာခဲ့ တာတွေ့ ခဲ့ ရ
ပါတယ်... အနားတစ်ဝိုက်ကလူတွေကတော့ ရပ်ကြည့် ရုံသာရပ်ကြည့် နေကြပြီး တစ်ယောက်မျှ တက်ပြီးကူ
ညီဖို့ မကြိုးစားခဲ့ ကြပါဘူး..." ဟု အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ဟိုတယ်စားပွဲထိုးမလေးက ဆိုပါတယ်...
" သူ့ ကိုတော့ ကယ်ရမှာပါ...ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ကျွန်မလည်း အယင်တုံးက အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ ဖူးလို့ ဒီလို
( အခြေအနေမှာ ) ဖြစ်ယင်ဘယ်လိုခံစားနေရမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာသိပါတယ်..." လို့ ယခင်က အ
ကြိမ်တော်တော်များများ ကိုယ့် ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ သည့် လျူ ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ ပါ
လူငယ်လေးဟာ တံတားလက်ရန်းအပြင်ဘက်တွင်ရှိနေပြီး အောက်ကိုပြုတ်ကျဖို့ ခြေတစ်လှမ်းမျှသာ အလို
မှာဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်...ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ၎င်းအားထိုကဲ့ သို့ သတ်သေရန်ကြံစည်မှုကို တားဆီးရန်ကြိုးစား
ခဲ့ သော်လည်း မအောင်မြင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်...
သူမဟာ ထိုလူငယ်လေးရဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီး ၎င်းယခုကဲ့ သို့ ခံစားဖြစ်ပျက်နေရတာဟာလည်း သူမကြောင့် ဖြစ်
ရတာပါလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုပြောကြားခဲ့ ပြီး လျူ ဟာ ထိုကောင်လေးအနားသို့ ရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ်..
" အမှန်တော့ ကျွန်မသူ့ ကိုအယင်ကတစ်ခါမှမတွေ့ ခဲ့ ဖူးပါဘူး...ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်အဲဒီလိုပဲတွေး
မိခဲ့ တာမို့ ဒီလိုပြောလိုက်တာပါ..." လို့ သူမကပြန်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ဒေသဆိုင်ရာရုပ်သံသတင်းအရ ထိုလူငယ်လေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ ပြီး သူ့ ရဲ့ မိထွေးဖြစ်သူ
ကလည်း သူ့ ကိုကောင်းမွန်စွာမဆက်ဆံပဲ သူ့ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ငွေတွေအားလုံးကိုယူပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့ ပါ
ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ သားဖြစ်သူတို့ ဟာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီး သူတို့ ရဲ့ ဘ၀ကို တစ်ဖန်ပြန်စခဲ့ ကြရပါတယ်..
လူငယ်လေးရဲ့ အကြောင်းကြားသိရတော့ လျူ ဟာငိုကြွေးခဲ့ မိပါတော့ တယ်...
" သူ့ မှာနေစရာအိမ်လည်းမရှိတော့ ဘူး၊ တစ်ယောက်မှလည်းသူ့ ကိုဂရုမစိုက်တော့ ဘူး၊ တစ်ယောက်မှ
လည်းသူ့ ကိုမယုံကြတော့ ဘူးလို့ သူက ကျွန်မကိုပြောပါတယ်...
ကျွန်မက သူ့ ကိုဘာမှမပြောပဲ ကျွန်မရဲ့ ညာဖက်လက်ကောက်ဝတ်က ဒါဏ်ရာတွေကိုပြလိုက်ပါတယ်...
ကျွန်မက မကြာခဏကိုယ့် ကိုယ်ကို သတ်သေတတ်ပါတယ်...လက်ကောက်ဝတ်သွေးလွှတ်ကြောကိုဖြတ်
ပြီး သတ်သေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ဖူးတယ်...တိုက်အမြင့် ပေါ်ကခုန်ချပြီး သတ်သေဖို့ ကြိုးစားဖူးတယ်၊ တစ်ခြားနည်း
တွေနဲ့ လည်းသတ်သေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ဖူးတယ် လို့ သူ့ ကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်..." လို့ လျူက ထိုလူငယ်လေးရဲ့ အ
သက်ကို အောင်မြင်စွာကယ်တင်ပြီးနောက် ဒေသခံရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုနှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ပြော
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အန်ဟွေပြည်နယ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ သည့် လျူ ဟတကျက်ကျက်ရန်ဖြစ်နေသည့် မိဘနှစ်ပါးထံ
တွင် ကြီးပြင်းခဲ့ ရပြီး ဆွံ့ အ၊နားမကြားဖြစ်နေသည့် သူမရဲ့ အစ်မ ကိုလည်းကြည့် ရှုစောင့် ရှောက်ခဲ့ ရပါသေး
ဘ၀ရဲ့ ခက်ခဲပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားတွေကြောင့် သူမဟာ အထက်တန်းကျောင်းသူဘ၀မှာပင်ကျောင်းထွက်ခဲ့ ရ
ပြီး ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀မှာပင် စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ ရပါတယ်...
အိမ်မှာဆိုဘယ်သူမှ စိတ်မချမ်းသာကြပါဘူး...ကျွန်မရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကလည်း တစ်ချိန်လုံး အော်ဟစ်ရန်ဖြစ်နေ
ကြလို့ အစ်မနှင့် ကျွန်မလည်း စိတ်ညစ်နေကြရပါတယ်...
ဒီလူငယ်လေး ( ရဲ့ ဘ၀ဟာ ) ကျွန်မငယ်ငယ်ကလိုပါပဲ...( စိတ်မချမ်းသာခဲ့ ရပါဘူး ) " လို့ လျူ ကပြောကြား
လူငယ်လေးဟာ ပိုမိုသည်းထန်စွာငိုကြွေးနေခဲ့ တာမို့ သူ့ မှာ ခံစားနားလည်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိတယ်ဆိုတာ
လျူ သိခဲ့ ပါတယ်...
" သူက သူ့ ဘ၀ဟာမျှော်လင့် ချက်ကင်းမဲ့ နေပြီမို့ သူ့ ကိုကယ်ဖို့ အချိန်ကုန်ခံမနေပါနဲ့ လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ကျွန်မကသူ့ ကို ငါမင်းရဲ့ အသက်ကိုကယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး...မင်းအခုလိုလုပ်နေတာဟာ ဘယ်
ငါ့ကိုကြည့် ....ငါဟာ အယင်ကအဲဒီလို (မင်းလို)အခြေအနေမျိူးမှာရှိခဲ့ ပြီး အခုအခါမှာတော့ ဒီလိုပဲဆက်
လက်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ တာပါပဲ..." လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
မမျှော်လင့် ပဲ လျူ က ထိုလူငယ်လေးကိုပွေ့ ဖက်လိုက်ပြီး နမ်းခဲ့ လိုက်ခြင်းဖြင့် တံတားပေါ်က သေကြောင်း
ကြံမှုကို တားမြစ်ဖို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုဟာ ကြည်နူးချမ်းမြေ့ ဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ ပါတယ်..
ရဲတပ်ဖွဲ့ က ထိုအခြေအနေကိုအခွင့် ကောင်းယူပြီး လူငယ်လေးရဲ့ ဓါးကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး သူ့ ကိုလည်း တံတား
လက်ရန်းအတွင်းဖက်ကို ဆွဲခေါ်နိုင်လိုက်ခဲ့ ပါတယ်....
" ကျွန်မသူ့ ကိုနမ်းလိုက်တော့ သူက သူ့ ရဲ့ ဓါးကိုင်ထားတဲ့ လက်ကို ကျွန်မရဲ့ ခါးပေါ်မှာတင်ပြီးထိန်းလိုက်ပါ
တယ်...ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ နင့် နင့် သီးသီးငိုကြွေးခဲ့ ကြပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူ့ အသက်ကိုကယ်
တင်နိုင်ခဲ့ လိုက်တာမို့ ကျွန်မအနေနဲ့ ဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်...." လို့ သူမကဆိုပါတယ်...
သူမအနေနှင့် သူ့ ကိုမနမ်းလိုက်ခင်မှာ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် သူ့ ကိုဖြေသိမ့် နိုင်လိမ့် မယ်ဆိုတာကလွဲလို့ တစ်
ခြားဘာမှ ထွေထွေထူးထူးမတွေးမိခဲ့ ပါဘူးလို့ သူမကဆိုပါတယ်...
" သူ့ အနေနဲ့ တစ်ခြားမဖြစ်သင့် တာမလုပ်ဆောင်အောင် သူ့ ရဲ့ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေဖို့ လိုတယ်လို့ ပဲ ကျွန်မ
ရဲတွေကလည်းကျွန်မတို့ အနားမှာမို့ ကောင်လေးကျွန်မကို ဆွဲပြီး အောက်ကိုခုန်ချလိုက်မှာကို မစိုးရိမ်မိပါ
ဘူး " လို့ သူမကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
လူငယ်လေးကိုကယ်တင်ပြီးနောက်မှာတော့ လျူ ဟာသူမရဲ့ ခရီးကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ ပါတယ်...
ကောင်လေးက သူမ၊ မရှိပဲသူ့ ရဲ့ အကြောင်းကိုပြောဆိုဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ တာမို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနှင့် သူမကိုအလျင်
အမြန်ပဲ ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်မကတော့ ပြန်မသွားခဲ့ ပေမယ့် သူနဲ့ ဖုံးပြောပြီး ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဖုံးနံပါတ်တွေကိုယ်စီ ပေးခဲ့ ကြပါတယ်...
ကျွန်မအနေနှင့် သူ့ ကို နောက်ပိုင်းမှာ ဖုံးဆက်ပါ့ မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ ပြီး ဘ၀မှာ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်
အောင်ဆက်လက်နေထိုင်ကြိုးစားဖို့ ကြားပေးပြောကြားဦးမှာပါ..." လို့ လျူ ကဆိုခဲ့ ပါတယ်....
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းပြုလုပ်ဖို့ သူမရဲ့ ဖုံးကိုခေါ်ဆိုမှုတွေအလွန်များ
ပြားတာမို့ သူမအနေနဲ့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်လို့ သူမရဲ့ အလုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် ဟီပန်းတိုင်ပန်း ဟို
တယ်မှ မစ္စတာလိုင်ရှိုးယန် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ ကျွန်မကတော့ ဒီကိစ္စကြောင့် ကျွန်မရဲ့ အလုပ်နဲ့ သာမန်ဘ၀ကို အကျိူးသက်ရောက်မှု
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကိုလည်း ဒီကောင်လေးကိုကူညီခဲ့ စဉ်တုံးက ထွေထွေထူးထူးမစဉ်းစားပဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ သ
လို ဘာမှဆက်ပြီး စဉ်းစားမနေချင်ပါဘူး...
ကျွန်မအတွက်ကတော့ ကျွန်မတို့ ဟာ နေ့ စဉ်ဘ၀မှာ စိတ်ချမ်းသာ၊ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေနိုင်ဖို့ ကသာ အရေး
ကြီးပါတယ်..." လို့ လျူ ကဆိုခဲ့ပါတယ်...
ကောင်မလေးကတော့ သူ့ လုပ်သင့် တယ်လို့ ထင်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားနိုင်ပေမယ့် ကောင်
According to local television, the boy's mother had passed away, his stepmother didn't treat him well and she left with all his father's money.
The father and son had to take part-time jobs and start their lives over again.
"He told me he didn't haveahome anymore, nobody cared about him and no one trusted him. I said nothing but showed him the scars on my right wrist.
I used to be suicidal - I've attempted cutting my artery, jumping fromahigh building and others," said Liu duringalocal TV interview after her successful rescue.
Nobody in my family was happy - both of my parents spent days brawling, which left my sister and I gloomy. That boy, he was likeayounger me," Liu said.
With the boy crying even harder, Liu knew he hadasense of being understood. "He said he's hopeless, 'so don't waste your time to save me'.
But I told him, 'I'm not saving your life, I just want you to realize how silly you are being.
Look at me, I've been there and I'm now here,'" she said.
The negotiation on the bridge ended likearomantic comedy when Liu hugged the boy and kissed him unexpectedly.
Police took advantage of the situation to take away the boy's knife and pull him inside the handrail of the bridge.
Posted by Unknown | at 12:37 AM |0comments
Dog guards baby forgotten in park overnight by drunk mother
အမူးလွန်သည့် မိခင်ဖြစ်သူမေ့ ကျန်ခဲ့ သည့် ကလေးငယ်ကိုခွေးကစောင့် ရှောက်..
ရုရှားနိုင်ငံ၊ ဆာရာတော့ ဗ် မြို့ မှ ပန်းခြံအတွင်းတွင် တစ်ညတာလုံး ( မိခင်ဖြစ်သူ၏ ) မေ့ လျော့ ကျန်ခဲ့ ခြင်း
ခံရသည့် သုံးလသားအရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးအား အိမ်မွေးခွေးမှ စောင့် ရှောက်ကာ အတူနေခဲ့ ပါတယ်...
ကလေးငယ်မှာ ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့ သည့် မိခင်ဖြစ်သူ၏ (မေ့ လျော့ ကာ) ကျန်ရစ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်
ပိုင်းတွင် ကလေးငယ်အား လက်တွန်းလှည်းပေါ်တွင် နံဘေးမှသစ္စာရှိသောခွေးကထိုင်ကာစောင့်ရှောက်နေ
သည်ကို တွေ့ ရှိခဲ့ ကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ကလေးငယ်၏မိခင်ဖြစ်သူ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ အိုဂလာက သူမဟာ ကလေးငယ်ဗာဒင်နှင့် ၎င်းတို့ ၏
ရော့ ဝဲလ်လာမျိူး အိမ်မွေးခွေးလာဒါ တို့ နှင့် အတူပန်းခြံထဲတွင် လမ်းလျှောက်နေကြခိုက် သူမရဲ့ သူငယ်ချင်း
မိတ်ဆွေများနှင့် တွေ့ ဆုံမိခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်...
မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းအုပ်စုဟာ ဘီယာသွားသောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါတယ်...ဘီယာတော်တော်များများ
သောက်ပြီးနောက်မှာတော့ အိုဂလာဟာ တော်တော်လေးမူးပြီး (ကလေးကိုမေ့ ကာ)အိမ်သို့ ပြန်သွားခဲ့ ပါ
နောက်တစ်နေ့ နံနက်တွင်မှ သူမဟာ ကလေးရော၊ ခွေးပါ အိမ်သို့ ပြန်မခေါ်လာမိခဲ့ ကြောင်း သတိရသွားခဲ့ 
အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်လောက်ပြီဟု စိုးရိမ်ကာ အိုဂလာဟာ သူမရဲ့ မိဘများကိုဖုံးဆက်ပြောကြားခဲ့ 
" သူမဟာအလွန်စိုးရိမ်ထိတ်လန့် ကာဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်...သားငယ်လေးကို လူခိုးခံရပါ
တယ်လို့ သူမက အော်ဟစ်ပြောဆိုနေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ အိုဂလာရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သစ္စာရှိသောခွေးနဲ့ မို့ ကလေးလည်းမပျောက်မရှပဲ အန္တရယ်ကင်းကင်းရှိနေခဲ့ ရတာပါ...
အိုဂလာရဲ့ မိဘများ သူမရဲ့ နေအိမ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ ကြပြီးနောက် သူတို့ ဟာ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုဖုံးဆက်
နောက်တော့ အိုဂလာရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက အနီးအနားရှိပန်းခြံထဲကိုသွားပြီး စုံးစမ်းကြည့် ရှုသည့် အခါတွင်မှ က
လေးငယ်ဗာဒင် ကိုခွေးနှင့် အတူတွေ့ ရှိခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်...
" ကလေးငယ်ဟာ စိုရွှဲနေပြီး ဆာလောင်ကာငိုကြွေးနေခဲ့တာကိုသူတို့ ကတွေ့ ရှိခဲ့ ပါတယ်...ဒါပေမယ့် ကံ
ကောင်းတာက ဘာမှအန္တရယ်မကျရောက်ခဲ့ တာပါပဲ..." လို့ အိုဂလာရဲ့ အိမ်နီးချင်းများကပြောကြားခဲ့ ကြပါ
" ရာသီဥတုကလည်းတော်တော်လေးနွေးနွေးထွေးထွေးရှိခဲ့ တာမို့ (ရုရှားမှာကအများအားဖြင့် အလွန်အေး
တတ်ပါတယ်...) ကလေးငယ်ဟာ အအေးမိပြီး ဖျားတောင်မဖျားခဲ့ ပါဘူး....ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ...
ခွေးကလည်း ကလေးကိုတစ်ညလုံးစောင့် ရှောက်နေခဲ့ ပြီး သူစိမ်းတွေကို အနားအကပ်မခံခဲ့ ပါဘူး..." ဟု
တာဝန်စိတ်ကင်းမဲ့ သည့် ( စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့ သည့် ) မိခင်ဖြစ်သူကို တနည်းနည်းဖြင့် အပြစ်ပေး
လောလောဆယ်တော့အိုဂလာရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက သူမရဲ့ မြေးကလေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ထားပါ
ဗော်ဒကာသာသောက်ပြီးမူးယင်တော့ ကလေးတင်မက သူ့ ကိုယ်သူပါ ဘယ်သွားပြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ
မသိလောက်အောင် မေ့ သွားလိမ့် မယ်...
ကိစ္စများမြောင် လူတို့ ဘောင် လို့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဒီနေ့ ကစပြီးကျွန်တော်အခန်းပြောင်းရပါဦးမယ်...
နောက်ရောက်မယ့် နေရာမှာ အင်တာနက်အဆင်သင့်မရှိသေးတာမို့ လောလောဆယ်တော့ သတင်းတွေ
ဘလော့ ကြွလာမိတ်သဟာများ အပျင်းပြေစေဖို့ ကြိုတင်ဘာသာပြန်ထားသည့် သတင်းဆောင်းပါးအနည်း
ငယ်နှင့် အပျင်းပြေစရာပုံရိပ်များတော့ schedule နဲ့ ပို့ စ်တင်ထားပါမယ်...
A dog guardedathree-month-old baby forgotten inapark forawhole night in the Russian city of Saratov. The baby had been left byareckless mother, and was later found with the loyal dog sitting by the pram. The baby’s mother, 22-year-old Olga, says she went forawalk in the park with little Vadim and their Rottweiler Lada, when she met her friends.
The girls decided to haveacouple of drinks, and after several beers Olga, quite drunk already, went home. Only in the morning did the woman realize she had brought home neither the baby nor the dog. Fearing the worst, Olga called her parents. “She was in panic,” says Olga’s mother. “She was screaming that her son had been stolen”.
When Olga’s parents arrived at her home they started calling her friends. Later, Olga’s father went out to check the nearby park and discovered the pram with little Vadim and the dog next to it. “The baby was found wet, hungry and in tears, but what’s more important, safe and sound,” say Olga’s neighbours.
“The weather was quite warm, so the baby even managed not to catch cold. Thank God, the dog had been guarding the whole night and had been keeping away all strangers”. It is still being decided whether the irresponsible mother is to be punished in any way. At the moment, Olga’s mother is taking care of her grandson.
Posted by Unknown | at 8:30 PM |2comments
Labels: news: rt.com
ခွေးအကောင် ၁၅၀၀၀ သတ်ဖြတ်ပြီးချက်ပြုတ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ခွေးသားဟင်းပွဲတော်....
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ ပိုင်း၊ ယုလင်းမြို့ မှာပြုလုပ်သည့် အစားအသောက်ပွဲတော်တွင် တည်ခင်းပြသရောင်းချ
သည့် အရသာရှိရှိ ဟင်းပွဲတွေကတော့ ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ချီပြီးလာရောက်ကြသည့်သူတိုင်းအကြိုက်တွေ့ 
အကြောင်းရင်းကတော့ ထိုမြို့ ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ အရသာအရှိဆုံးခွေးသားဟင်း ကိုချက်ပြုတ်တည်ခင်း
ရောင်းချနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသအတွင်းမှာတော့ လူသိထင်ရှားပါတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် ရက်သတ္တပါတ်ရဲ့ ရုံးပိတ်ရက်များမှာ စတင်ခဲ့ သည့် တစ်ပါတ်ကြာ ပွဲတော်မှာ ခွေးသားဟင်းအ
ရသာကို မြည်းစမ်းအကဲခတ်ကြမယ့် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ခွေးအကောင်ပေါင်း၁၅၀၀၀ ကျော်ကိုသတ်
ဖြတ် ချက်ပြုတ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
" ၀ " တို့ ဆီမှာတော့ တရုတ်အမဲ လို့ ခေါ်ပါတယ်...
ထိုဒေသမှ လယ်သမား၊ မွေးမြူရေးသမားများကတော့ ခွေးသားဟင်းကောင်းကောင်းအတွက် ခွေးမျိူးပေါင်း
များစွာကို သေချာကျန မွေးမြူတတ်ကြလို့ လူသိထင်ရှားကြပါတယ်...
" ( အဲဒီခွေးသားဟာ ) တစ်ခြားအသားတွေလိုပါပဲ... တိရိစ္ဆာန်အကောင်ငယ်လေးတွေရဲ့ အသားဟာ ပိုပြီး
နူးညံ့ ပြီး ချိူသလို အကောင်ကြီးတဲ့ ခွေသားကလည်း လေးလေးပင်ပင်နဲ့ အသားဓါတ်အရသာပိုပါတယ် "
လို့ ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ လူဟင်း ကရှင်းပြပါတယ်...
ဘဲကင်နဲ့ အပြိုင် ခွေးကင်လေများလား...
" ခွေးသားဟင်း ဟာတရုတ်ပြည်မှာတော့ လူကြိုက်များတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်.... ကျွန်တော်တို့ ဒေသ
ကတော့ အဲဒီခွေးသားဟင်းကို စတင်ခဲ့ တဲ့ မူလအစဖြစ်ပါတယ်...
ဒီခွေးသားဟင်းပွဲတော်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာပဲ လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်အနည်းငယ်ကပင်စတင်ကျင်းပ
ခဲ့ ပြီး အကောင်းဆုံးခွေးသားဟင်းကိုဒီ ယုလင်း ဒေသမှာသာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းလက်ခံလာအောင်
ပြသ နိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
ဒါကြောင့် မို့ လည်း ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီပွဲတော်ကို စီမံဖန်တီးခဲ့ ပြီး ဒီပွဲတော်ကို လာရောက်ကြသည့် ပရိတ်
သတ် အရေအတွက်ကိုကြည့် ချင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဒေသက ခွေးသားဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းသ
လဲဆိုတာ လူတိုင်းကလက်ခံအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာ သိသာနိုင်ပါတယ်..." လို့ သူကဆက်ပြောပြခဲ့ ပါ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘေကျင်းမြို့ တော်တွင် မီးဖိုပေါ်၊ ဆီအိုးထဲတွင် ဘ၀ဇတ်သိမ်းရတော့ မည့် 
ခွေးများ ထရပ်ကားလှောင်အိမ်ထဲတွင် မြင်ရစဉ်...
တရုတ်နိုင်ငံတွင်တော့ ... အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတောင်ပိုင်း(ရွှေပြည်ကြီးနှင့် နီးသည့် ) ပြည်နယ်များတွင်
" ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် အထောက်အကူလည်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည့်အတွက် " ချိူ
မြိန်ရသာ အသားဟင်းလျာ " ဟုထိုဒေသတွင် ခေါ်ကြသည့် ခွေးသားဟင်းကို တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ နှစ်ပေါင်း
ထောင်နှင့် သောင်းနှင့် ချီပြီးရှိခဲ့ ပြီဟုဆိုပါတယ်...
သို့ သော်လည်း ထိုကဲ့ သို့ ခွေးသားဟင်းအတွက် (ခွေးများကိုသတ်ဖြတ်ရတာဟာ) တိရိစ္ဆာန်များကို ရက်
စက်မှုအဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ယခုနှစ်များအတွင်း ပိုမိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ ကြပါတယ်...
အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနှင့် ယခုအခါမှာတော့ ခွေးသားစားခြင်းကို တရားဝင်တားမြစ်နိုင်မည့် ဥပဒေ
လွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့ သည့် အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကာလများအတွင်း နိုင်ငံခြားတိုင်း
ပြည်များမှ လာရောက်သူများအား မနှစ်မြို့ ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ခွေးသားဟင်းကို တရားဝင်အား
ကစားပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာ စားသောက်ဆိုင်များမှ တားမြစ်ပယ်ရှားခဲ့ ပါတယ်...
ပုံတွေမြင်ရတာနဲ့ တင် အန်ချင်စရာပါပဲ...
ကြိုက်တဲ့ သူတွေကလည်း ပန်းနာရောဂါအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုပြီးဆင်ခြေပေးကာ စားနေကြတာပါပဲ...
Posted by Unknown | at 11:23 AM |4comments
Posted by Unknown | at 8:32 PM | 1 comments
Posted by Unknown | at 8:59 PM |2comments
Vietnamese man appeals for help to afford operation to remove massive tumour
ဗီယက်နမ်မှ အံ့ ဖွယ်အကြိတ်ကြီး...
၁၈၆ ပေါင် ( ကီလို ၈၀ ) အလေးချိန်ရှိသည့် သူ့ ရဲ့ အဖုအကြိတ်ကြီးကတော့ ကမ္ဘာ့ စံချိန်ချိူးလောက်ပေ
မယ့် ငုယင်ဒွေဟိုင်း ရဲ့ အပြုံးပန်းကတော့ စာဖွဲ့ လောက်အောင် သန့် စင်ချိူမြလှပါတယ်...
အသက် ၃၁ နှစ်ရှိ ဗီယက်နမ်အမျိူးသားရဲ့ ညာဖက်ခြေထောက်မှာ သူ့ ကိုမွေးစကတည်းက အဖုအကြိတ်
လွန်ခဲ့ သည့် ၁၄ နှစ်ကတည်းက ဒူးခေါင်းနေရာကနေ ဖြတ်ပစ်ခဲ့ လိုက်ပေမယ့် ( ထိုအကြိတ်ကြီးကတော့ )
၁ မီတာ ( ၃ ပေကျော် ) ခန့် အထိ ကြီးမားနေခဲ့ ပါသေးတယ်...
" ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ...ထိုင်နေယင်ထိုင်နေ၊ ဒါမှမဟုတ်လှဲနေယင်လှဲနေ၊ ဒါပဲ
လုပ်နေရတာပါပဲ..." ဟု နိုင်ငံ၏ အလယ်ပိုင်းကုန်းပြင်မြင့် အရပ်ရှိ ဒါလက် မြို့ ကလေးမှ နေအိမ်လေးတစ်ခု
တွင်နေထိုင်သည့် ငုယင်ဒွေဟိုင်း ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူဟာ သူ့ ကိုပြုစုစောင့် ရှောက်နေသည့် အသက် ၆၁ နှစ်အရွယ်ရှိ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် နေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်..
သူ့ ရဲ့ အဖုအကြိတ်ကြီးက ကင်ဆာမဟုတ်ပဲ မွေးရာပါ ဗီဇဓါတ်ချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
လို့ ဆရာဝန် ဗူဗန်သက် ကဆိုပါတယ်...
" အကယ်၍သာ အဲဒီအကြိတ်သာ ကင်ဆာမြစ်ပွားနာဆိုယင် သူအခုအထိတောင်အသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်
ပါဘူး..." လို့ သူကဆိုပါတယ်...
အဆိုပါအဖုအကြိတ်ကြီးဟာ ဗီယက်နမ်နိင်ငံရဲ့ မှတ်တမ်းအရတော့ အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဟနွိုင်မြို့ အဖုအ
ကြိတ်မြစ်ပွားနာဆေးရုံ၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးဌာနအကြီးအကဲ ဒေါက်တာဗူဗန်သက် ကဆိုပါတယ်...
၁၉၉၇ ခုနှစ်က အကြိတ်ကြီး ထပ်မကြီးလာရအောင် သူ့ ရဲ့ ခြေထောက်ကိုဖြတ်ပြီး ကုသခဲ့ ပေမယ့် မအောင်
မြင်ခဲ့ လို့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံခွဲစိတ်ဖို့ တော့ သူ့ ရဲ့ မိသားစုဟာမတတ်နိုင်ရှာတော့ပါဘူး...
ဒါကြောင့် အခုတော့ သူဟာ ဆေးကုဖို့ ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်ရန်တောင်းပန်ဆော်သြနေပါတယ်...
His 186lb (80kg) tumour is record-breaking, but the size of his smile is what's really remarkable about Nguyen Duy Hai. The 31-year-old Vietnamese man has hadatumour growing on his right leg since soon after he was born. Despite having an amputation at the knee 14 years ago, he still hasa1m-wide growth.
"I can't do anything, I can only sit and lie down," he said in his home in the town of Da Lat in the country's Central Highlands. He lives under the care of his 61-year-old mother.
The tumour is non-cancerous and could be due toagenetic mutation, doctor Vu Van Thach said. "If it was malignant he would not be alive now," he said.
The tumour is the largest ever documented in Vietnam, Vu Van Thach, head of examination department of Hanoi tumour hospital, said. "It'sarecord as far as we know," he said. Hai's family are too poor to afford another operation after the amputation in 1997 failed to stop the growth, and now he is appealing for funds to afford medical help.
Posted by Unknown | at 10:45 AM | 1 comments
Labels: news: translate.google.com
World’s scariest job? Meet the workers buildinga1m-wide wooden road onavertical cliff face
ကမ္ဘာ့ အသည်းယားစရာ၊ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအလုပ်လေလား....
ခနော်နီခနော်နဲ့ ယာယီတံတားဆိုတာ ဒါမျိူးပေါ့ ...ဒါပေမယ့် ဒီလိုနေရာမျိူးမှာကျတော့ အမှားမခံဘူနော်..
Rickety: With only eagles for company, this builder inspects his handiwork, with his feet mere millimetres from the edge
ရှုခင်းကတော့ လှပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ငုံ့ မကြည့် ရဲလောက်အောင်ပါပဲ...
Don't look down: This worker reaches out to tighten the scaffolding
ကျောက်တောင်နဲ့ ပါတ်လမ်း...အ၇မ်းတွေစွပ်လုပ်တတ်တာ သူတို့ သဘာဝလေလား...
Sheer madness: This picture shows just how narrow the road is - and just how vertical the cliff is
လူအမျိူးမျိူး ဘ၀အထွေထွေဆိုတာ တယ်မှန်ပါလားနော်...
Hang time: Surely there must be easier ways to makealiving?
အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀လုံခြုံစိတ်ချရေးကို နည်းနည်းလေးမှ မထည့် တွက် မစဉ်းစား...
Up, up and away: The road the workers are building is just 1m wide - and there are plenty of gaps in it...
အမြင့် ကြောက်တတ်တယ်ဆိုယင်တော့ မကြည့် တာကောင်းပါတယ်...
တစ်ချိူ့ သူတွေကကျောက်တောင်အစွန်းလိုအမြင့် နေရာက အစွန်အဖျားနားတွေကိုသွားဖို့ မခံစားနိုင်
လောက်အောင်ကြောက်ရွံ့ စိုးထိတ်နေချိန်မှာ ဒီတရုတ်အလုပ်သမားတွေကတော့ အမြင့် ပေပေါင်းထောင်
သောင်းချီတဲ့ နေရာမှာ လမ်းတံတားဆောက်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်...
သူတို့ တပ်ဆင်တည်ဆောက်နေတဲ့ လမ်းကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူနန်ပြည်နယ်၊ ရှိဖို တောင်ရဲ့ ၉၀ ဒီဂရီအ
ထိ မတ်စောက်လှတဲ့ တောင်နံရံမျက်နှာပြင်မှာ အရံအတား၊ အမှီအတွယ်မပါပဲ ဆောက်လုပ်နေကြတာဖြစ်
ဒီထက်ပိုပြီးဆိုးတာက ထိုလမ်းဟာ ၁မီတာ ( ၃.၂ ပေ ) သာကျယ်တာမို့ ထမင်းစားပွဲခုံသာသာအကျယ်မျှ
သာဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ ပိုင်း၊ ကျန်စီပြည်နယ်မှ လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သ
မားများကတော့ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှုင်းရေးလုံခြုံမှုစီမံချက်မရှိသလောက်ဖြစ်သည့် အခြေအနေမျိူးမှာပဲ
ဒီလိုမြင်ကွင်းကတော့ လူသားတွေရဲ့ လုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာမှုတို့ ကိုအလေးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့
ယာယီတံတားရဲ့ ပျဉ်ချပ်တွေက တော်တော်ပဲပါးပါးလှပ်လှပ်လေးဖြစ်ပြီး မခိုင်မခံ့ တဲ့ အနေအထားမို့ ပြုတ်ကျ
ပြီးသေဖို့ ကတော့ တစ်ကယ့် ကိုအလွယ်လေးဖြစ်နေပေမယ့် အလုပ်သမားတွေကတော့ နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်းပဲ
အကြောက်အလန့် မရှိ လုပ်ကိုင်နေကြရရှာပါတယ်...
ထိုလမ်းတံတားပြီးစီးသွားပါက အရှည် ( ၃ ကီလိုမီတာ ) ၁.၈ မိုင် ရှိမှာဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အရှည်လျားဆုံး
ဒါပေမယ့် ဒီတံတားပြီးသွားခဲ့ ယင် ဘယ်လိုသတ္တိရှင်ကများဒီကိုလာပြီးလျှောက်ကြည့် အပန်းဖြေနိုင်မှာလည်း
ဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတော့ တယ်...
While some people would find it unbearable to go anywhere near the edge ofacliff, these Chinese workers are buildingaplank road on the face of one that’s thousands of metres high.
The road they’re assembling is on Shifou Mountain in Hunan Province and stands vertical at 90 degrees without any slopes or alcoves.
What’s more, the road is just 1m (3.2ft) wide – the width ofadinner table – and the workers, from China's eastern Jiangxi Province, toil away on it with the bare minimum of safety measures.
The scene isaterrifying one for those from health and safety conscious nations such as ours. The planks look distinctly thin and rickety andafall to certain death is just centimetres away - but the workers toil away fearlessly every day.
The finished road will stretch for three kilometres (1.8 miles), making it China’s longest sightseeing plank.
Posted by Unknown | at 9:18 AM |2comments
လူ့ မစင်မှ အသားတုထုတ်လုပ်နိုင်ပါပြီ...
စားကြဦးမလား ဂျပန်ပဲပုတ်ခြောက်ကျော် ..အဲလေ...မစင်အသားတု တဲ့ ခင်ဗျာ...
ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုဟာ အရေးတစ်ကြီးဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာနေပါတယ်...
သည့် နေရာမှ ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆနေခဲ့ ပါတယ်...
နာများ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေခဲ့ သဖြင့် တိုကျိူ မိလ္လာဌာနအနေဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုအကျိူးရှိစွာဖြေရှင်းနိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာဖို့ ၎င်းအား ပန်ကြားပြောဆိုခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
တစ်မျိူးအဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ပရိုတိန်းဓါတ်များ ရာနှုံးမြင့် ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်...
ပင် ထပ်မံထည့် သွင်းလိုက်ပါသေးတယ်...
အသားအစားထိုးပစ္စည်းဟာ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်...
ပင် အလုအယက်တောင်းဆိုကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
အများ ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် နေပါတယ်...
လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ " မစင်အသား " ဟာ သာမန်အသားထက် ၁၀ ဆ မျှပိုမိုဈေးကြီးနေပေမယ့် 
ညာရှင်က မျှော်လင့် နေပါတယ်...
ငတ်လာယင်တော့ လည်း စားကြရမှာပါပဲ...
The Japanese researcher from the Okayama laboratory says its country has more sewage mud than they can handle, so Tokyo Sewarage asked him to explore its possible use.
Knowing the wacky nature of many Japanese scientists, it’s no surprise he came up withaturd burger. During his research, he discovered sewage mud containsagreat deal of protein so he began developingaprocess of extracting that valuable protein and turning it intoaviable meat substitute.
Sewage mud is high in protein, because it’s full of bacteria, most of which comes from human feces. However, these microorganisms are harmless, because they are killed by heat during the manufacturing process. According to initial tests, the artificial meat even tastes like beef, thanks to added soy prote in, and Ikeda added some red food coloring to give itamore natural look. In terms of nutritive values, the turd burger doesn’t sound bad at all: it’s 63% protein, 25% carbohydrates, 3% lipids and 9% minerals.
Posted by Unknown | at 12:33 AM |2comments
နာရီပေါင်း ၁၀၀ ကြအောင် သဲအမြုပ်ခံခဲ့ သည့် မျက်လှည့် ဆရာ...
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ မျက်လှည့် ပညာရှင်တစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့ သည့် ကြာသပတေးနေ့ ကသဲအပြည့် ထည့် သွင်းဖုံး
အုပ်ထားသည့် တယ်လီဖုံးရုံတစ်ခုအတွင်းတွင် နာရီပေါင်း ၁၀၀ အမြုပ်ခံခဲ့ ပြီးကမ္ဘာ့ စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့ 
ဖျော့ တော့ ပြီး မောပန်းနွမ်းနယ်နေပုံပေါက်သည့် ချိူရှန်ကန်း ဟာ တိုင်ပေမြို့ ဟွာရှန်း အပန်းဖြေပန်းခြံထဲရှိ
အများသုံးတယ်လီဖုံးရုံထဲမှ ၎င်းကိုဆွဲထုတ်ခဲ့ စဉ်မှာ လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး ခပ်ယဲ့ ယဲ့ သာပြုံးနိုင်ရှာပါတော့ 
တနင်္ဂနွေနေ့ ကစတင်ခဲ့ သည့် ၁၀၀ နာရီကြာ လူသားတစ်ဦးရဲ့ အပင်ပန်းဆင်းရဲခံနိုင်မှု စွမ်းပကားအား စမ်း
သပ်သည့် စွန့် စားလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည့် ချိူရဲ့ ပြကွက်နောက်ဆုံး နာရီ၊ မိနစ်များကို သတင်းထောက်များ
နှင့် လူအုပ်ကြီးကပါလာရောက်စောင့် ကြည့် နေခဲ့ ကြပါတယ်....
Cho Sheng-keng was released fromasand-filled kiosk after 100 hours
နာရီပေါင်း ၁၀၀ သဲထဲမှာအမြုပ်ခံခဲ့ သည့် မျက်လှည့် ဆရာ ချိူရှန်ကန်း....
အီဂိုဟု မျက်လှည့် စင်မြင့် ထက်တွင် လူသိများသည့် ချိူ ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ဆေးရုံတစ်ခုသို့ အလျင်အ
မြန် ပို့ ဆောင်လိုက်ပါတယ်...
ထိုမျက်လှည့် ဆရာဟာ အဖျားသွေးအနည်းငယ်ရှိပြီး ရေဓါတ်ချိူ့ တဲ့ မှုဒါဏ်ခံစားရရုံကလွဲလို့ အရာရာအား
လုံး အကောင်းပကတိကျန်းမာနေပါတယ်လို့ ဆရာဝန်များက ဆိုပါတယ်...
လေးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ သည့် သက်စွန့် ဆံဖျားပြကွက်မှာ ချိူ ဟာ ပိုက်နှစ်ခုမှတစ်ဆင့် အသက်ရှုခြင်း၊ ရေ
သောက်ခြင်းမျှသာ ပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဖုံးရုံ၏မျက်နှာစာတွင်ရှိသည့် အပေါက်တစ်ခုမှ ၎င်း၏လက်ကိုထုတ်ပြီး လာရောက်ကြည့် ရှုသူများနှင့် လက်
ဆွဲနှုတ်ဆက်နိုင်ပြီး၊ အကယ်၍အန္တရယ်ရှိနေခဲ့ ပြီဆိုပါက အချက်ပြနိုင်အောင်စီစဉ်ထားခဲ့ ပါတယ်...
ကြေးမုံပဒေသာကပွဲ ဟုအမည်ရှိသည့် ၎င်း၏အဖွဲ့ သားများဟာ ပြကွက်ကလာတစ်လျှောက်လုံး ၎င်း၏အ
သက်ရှူမှု၊ နှလုံးခုန်မှု နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တို့ ကို ၂၄ နာရီပါတ်လုံးစောင့် ကြည့် အကဲခတ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
" သူ့ ရဲ့ နှလုံးခုန်သံကိုကြည့် ပြီး သူအိပ်နေသလား၊ မအိပ်ဖူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ ပြောနိုင်ပါတယ်...
၃.၆ တန်ရှိတဲ့ သဲထုအောက်မှာတစ်ကိုယ်လုံးအမြုပ်ခံပြီး အပြင်မှာလည်းမိုးတွေရွာနေလို့ အအေးဒါဏ်ကို
ပါ ကြံ့ ကြံ့ ခံခဲ့ တာဟာ ကိုယ်နဲ့ စိတ် ရဲ့ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားကို စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...ကျွန်တော်တို့ က
တော့ သူ့ အတွက်တစ်ချိန်လုံး စိုးရိမ်နေခဲ့ ကြပါတယ်..." လို့ မျက်လှည့် အဖွဲ့ ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ချန်ချာလွန်း
က ဂျာမာန်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်သည့်ဒီပီအေ ကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ယခင်ကလည်း ဆပ်ကပ်သမားတွေကို သေတ္တာထဲထည့် ပြီး မြေအောက်မှာမြုပ်ခဲ့ တဲ့ စွန့် စားခန်းပြကွက်
များ ပြုလုပ်စမ်းသပ်ခဲ့ ဖူးပါတယ်လို့ ချန် ကပြောခဲ့ ပါတယ်...
" ချိူ ကတော့ ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်း၊ ဂင်းနက်စ် စံချိန် တင်ချင်လို့ အခုလိုသဲမြုပ်ခံခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်.."
လို့ ချန် ကဆိုပါတယ်...
ကြေးမုံ ပဒေသာကပွဲအဖွဲ့ ဟာ ချိူ ရဲ့ စွန့် စားခန်းကို ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ပြီး ၎င်းတို့ အနေဖြင့် စံ
ချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့ တယ်ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဂင်းနက်စ် ကမ္ဘာ့ စံချိန်မှတ်တမ်းအဖွဲ့ 
A Taiwanese magician on Thursday claimed to have setaworld record for being buried alive for 100 hours inasand-filled kiosk.
Cho Sheng-keng, looking pale and exhausted, raised his hand and flashedatired smile as he was pulled out of the kiosk at the Huashan Creative Park in Taipei.
Dozens of reporters andahuge crowd joined the countdown of Cho's 100-hour adventure testing human endurance, which began Sunday.
Cho, known by his stage name Igo, was rushed toahospital for medical checkup.
Doctors said he suffered from dehydration andaslight fever, but was otherwise fine. During the four-day stunt, Cho survived by breathing and drinking water through two tubes.
A hole in the front of the kiosk allowed him to shake hands with visitors and signal if he was in danger.
Members of his magic troupe, the Mirror Theatre, monitored his breathing, heartbeat and body temperature around the clock.
"From his heartbeat, we could tell he slept on and off. Being buried in 3.6 tons of sand and enduring the cold caused by the rain, wasatest of his body and mind. We were worried for him all the time," Chang Chia-lun, head of the magic group, told the German press agency DPA.
Chang saidasimilar stunt had been tried before, as performers were placed inawooden box which was buried underground.
"Cho was buried in sand, and he wanted to setaGuinness World Record for that," Chang said.
The Mirror Theatre videotaped Cho's stunt and has asked the Guinness World Records committee to verify whether it had setanew benchmark, he added.
Posted by Unknown | at 10:53 PM |0comments
Labels: news: monstersandcritics.com
သစ်တောသစ်ပင်မပြုန်းတီးဖို့ ...တို့ တွေချစ်ကြစို့ ..
သစ်တောတွေကို ကာကွယ်ဖို့ တို့ တစ်တွေချစ်ကြစို့ ...
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြေရေးဆိုင်ရာလှုံ့ ဆော်ဆန္ဒပြသည့် ရူးကြောင်မူးကြောင်စုံတွဲတစ်တွဲဟာ
နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုမြို့ တော်ရဲ့ ဘုရာရှိခိုးကျောင်း၊ ၀တ်ပြုဆုတောင်းခန်းမစင်မြင့် ထက်တွင် (သဘာ
၀ပါတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလမ်းစိုပြေစေရေး သတိပြုမိစေရန် လှုံ့ဆော်သည့် အနေဖြင့် ) အ၀တ်မပါ၊ ကိုယ်ဗလာ
ဖြင့် ချစ်တင်းနှောကာ၊ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ ကြပါတယ်...
အော်စလို၊ ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် မဖွယ်မရာပြုခဲ့ သည့် ထိုစုံတွဲကို အံ့ အားသင့် ကာ တုန်
လှုပ်ချောက်ခြားခဲ့ ရသည့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့ လာရောက်သူတစ်ဦးက ရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ အကြောင်းကြားခဲ့
ပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ ပါတယ်...
စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေခဲ့ ကြသည့် ( စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုလည်းဆိုးစရာပါပဲလေ...) ၀တ်ပြုဆုတောင်းသူများက
လည်း ထိုလူ့ တော်သလင်းပွဲတစ်ခန်းရပ်ပြဇတ်ကို ပြသနေကြသည့် စုံတွဲအား ဆွဲခွာခဲ့ ကြပြီး ရဲများရောက်
ရှိလာသည်အထိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့ ကြပါတယ်...
ထိုကဲ့ သို့ ပြုမူနေသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်နေသည့် သူတစ်ဦးကိုလည်း ၎င်းတို့ က ဖမ်းဆီးခဲ့ ပါ
" အော်စလို ဂိုဏ်းအုပ်ကျောင်းတော်အတွင်း၊ စင်မြင့် ထက်တွင် မဖွယ်မရာလိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်သည့် သူ
သုံးဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ ကြောင်း..." ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကဆိုပါတယ်...
ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ အမည်မဖေါ်ပြခဲ့ သည့် တရားခံသုံးဦး၏ပြောဆိုခွင့် ရှိသူက " ကျွန်တော်တို့ အနေနှင့် ဒါဏ်ငွေအ
နည်းငယ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...အကယ်၍ ဒါဏ်ငွေမဆောင်ပါက ၁၆ ရက် ထောင်ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်..
အဲဒီလောက်အကြာကြီး ( ၁၆ ရက်တောင် ) မချစ်ရယင်မနေနိုင်တာမို့ ဒါဏ်ငွေဆောင်ဖို့ သဘောတူလိုက်
ပါတယ်..." ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါ ရမ္မက်ဇောအဟုန်ကြွသည့် ပြောမယုံ၊ ကြုံမှသိရမည့် စုံတွဲဟာ " သစ်တောတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ၊ တို့ 
တစ်တွေ ချစ်ကြစို့ " ဟူသော ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ သစ်တောပြုန်းတီးမှုများအား ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအ
မှတ်ပြုစေဖို့ ၊ သတိပြုစေဖို့ အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင် လိင်ဆက်ဆံပြခြင်းဖြင့် လှုံ့ဆော်သည့် အဖွဲ့ ဝင်များ
ထိုအဖွဲ့ က ယခုကဲ့ သို့ လူအများအား မဖွယ်မရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြခြင်းဖြင့် လှုံဆော်ခြင်းက ( ပိုမိုထိရောက်
အောင်မြင်သည်ဟု ) ယုံကြည်ပါတယ်...
တော်တော်ကြီးတဲ့ အကြံနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုပါပဲ...
ဆန္ဒရှိယင်လည်း တော်ရာနေရာ၊ မမြင်ကွယ်ရာမှာ သွားကြပါလား...
လုပ်ပြစရာရှားလို့ သူများတွေရဲ့ ဘာသာရေးအထွတ်အမြတ်နေရာမှာမှလုပ်ပြရသလားဗျာ...
Wood you believe it -acouple of crackpot Green protesters stripped off naked to have sex on the alter in the middle ofachurch service in Oslo, Norway.
The kinky pair are part of Swedish pressure group "Fuck For Forests" that is trying to publicise global deforestation by having sex in public to draw attention to the problem. It believes in campaigning for the cause by outraging public decency.
Posted by Unknown | at 10:44 AM | 1 comments
ယခုဓါတ်ပုံများမှာပါသည့် လူများဟာ မွေးကတည်းက အမြီးကဲ့သို့ အသားပိုများနှင့် ဖြစ်ကြပါတယ်...
အမှန်တော့ မြီးညှောင့် ရိုးဆိုပြီးတော့ တောင်မြန်မာအခေါ်အဝေါ်ရှိသေးတာပါပဲ...
အခုလူတွေကတော့ မြီးညှောင့် ရိုးအမှန်တစ်ကယ်ရှည်သည့် လူများပေါ့ ...
ဒါပေမယ့် အမည်နဲ့ ဆန့် ကျင်စွာပင် မြီးညှောင့် ရိုးမှာ အရိုးမပါပါဘူး...
မွေးရာပါချွတ်ယွင်းမှုလို့ ပဲခေါ်ခေါ်၊ သဘာဝတရားရဲ့ ထိတ်လန့် အံ့ သြဆန်းကျယ်ဖွယ်ရာလို့ ပဲဆိုဆို တစ်ကယ့် ကို ထူးဆန်းတာကတော့ အမှန်ပါပဲ...
၀ီကီမီဒီယာကတော့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိူးကို spina bifida လို့ ခေါ်ကြောင်းဆိုထားပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊အ
နောက်ဘင်္ဂေါပြည်နယ်၊ ဂျယ်လ်ပိုင်ဂူရီခရိုင်၊ အလီပါဒွါ ဒေသမှာ အရှည်၁၃ လက်မခန့် ရှိသည့် အမြီးကဲ့ 
သို့ အသားပိုပါရှိသည့် ချန်ဒရီအိုရမ် အမည်ရှိလူတစ်ဦးရှိခဲ့ ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
Reference From Wikimedia:
Posted by Unknown | at 11:03 AM | 1 comments
ခေါင်းစဉ်ကတော့ ဆရာကြီးမောင်သာရရဲ့ နာမည်ကျော် ၀တ္တုတစ်ပုဒ်အမည်ပါပဲ...
လူတွေဓါတ်ပုံရိုက်ကြတဲ့ အခါ ရိုက်တော့မယ် ပြုံးနေနော်လို့ ပြောတတ်ကြပေမယ့် ခွေးတစ်ကောင်ကိုတော့ 
ခုလိုပြုံးပြတတ်လိမ့် မယ်လို့ တော့ ထင်မိကြလိမ့် မှာမဟုတ်ပါဘူး...
ဒါပေမယ့် ဒီဓါတ်ပုံကတော့ အခုရက်ပိုင်းလေးတွင်မှာပဲ အင်တာနက်တစ်ခွင်ရေပန်းစားနေတဲ့ ပြုံးနေ
တဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ တဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ပါပဲ...
လက်နှစ်ဖက်ပူးပြီး အရိုအသေပြုတတ်ဖို့ လည်းလိုသေးတယ်...အဲဒါတတ်ရင် ပြီးပြီ...
ရီလေး လို့ ခေါ်တဲ့ ဒီခွေးကလည်း သူ့ မွေးနေ့ ပွဲကို ကိတ်မုန့် ကြီးနဲ့ ကျင်းပရလို့ 
၀မ်းသာမှုကို မမြိုသိပ်ထားနိုင်ပဲ ပြုံးနေခဲ့ ပါတယ်...
Posted by Unknown | at 10:27 AM | 1 comments
Labels: photo fun: daily mail
Posted by Unknown | at 11:08 AM |3comments